Grid wanikezela ibhokisi imitha ezinjengeetheminali AF1-50B / HS25X2 - China Shanghai IPKIS
Grid wanikezela imitha ibhokisi ezinjengeetheminali AF1-50B / HS25X2
Grid wanikezela iiterminal ibhokisi imitha
Ukususela ekuqaleni kuka-2012, IPKIS savelisa AF uthotho iimveliso imodyuli-line nkqutyana yaye isicelo selungelo elilodwa lomenzi. Emva kweminyaka embalwa yokusebenza kwiimarike kunye nophuhliso, iintlobo siyanda. Iimveliso ezisetyenziswa kakhulu kwiibhokisi ngamandla wekhadi, ombane aphantsi nekhabhathi ukwabiwa, izixhobo efrijini mechanical, ukubiza izithuba kunye noololiwe umbane, ingakumbi kwinkqubo photovoltaic amandla.
IPKIS umnqongo sub-line, uyilo ephuhlileyo, ukusetyenziswa ezintsha multi-maleko technology uphose ubhedu zokusombulula terminal distribution multi-isebe yokunqongophala kwendawo line, ukusebenza kwayo lula, uqhagamshelwano ikhuselekile na kwaye ithembekile; ke yesiphelo distribution multi-point The best line iqabane.
Kwiminyaka yakutshanje, IPKIS R & D iqela, abathengi kuphuhliso lwemveliso ezintsha, ngexesha ngokukhawuleza olulandelayo kwinkampani iminyaka emininzi ezijoliswe imvula ubugcisa, wabeka phambili iseti nelayo izisombululo ekuveliseni umhlathi imifuziselo entsha, Ogqibeleleyo abathengi yesandi emele ukudlalwa endaweni isixhobo esitsha.
Bona ukukhanya ngoko nangoko
Ukusebenzisa inkqubo yokuvelisa ezintsha esikhethekileyo, ibhloko lobhedu umgca Ukuhlukunyezwa xi zokuphambukisa eqhelekileyo, endaweni uhlobo nokuphakamisa umgca ibhokisi xi ambumbe, zithembeke ngakumbi;
Ngqo uyilo ukungunda, ukudala isimo esihle zifakwe ngokupheleleyo, ekhuselekileyo, ezintle, ukugcoba;
Iimveliso ezikhuselekileyo kunye oluthembekileyo ezintsha, lula umsebenzi, ukusebenza phezulu, emhle imbonakalo kwibakala eliphezulu;
uneswitshi switch ngqo kwaye efanelekileyo, ingenamthungo, ngqo kwaye ongenantandabuzo, ukonga ixesha nezixhobo zokwenza ukhawuleze umsebenzi wofakelo kunye nokusebenza isithuba.
AF series shunt iitheminali kunye neengcinga ezintsha isakhiwo, shunt iphepha conductive usebenzisa inkqubo ekhethekileyo indlela yokubumba, kwi-terminal ilayini ngasentla ukufikelela 35mm2 crimp impumlo okanye ipleyiti sobhedu ipleyiti ngqo crimp; terminal kugesi enobunye njenge ileli-uhlobo nokuphakamisa ityhubhu Crimping, crimping iinxalenye sheet conductive ziphenjelelwa lube yinto Wotho, ukwanda kwindawo zoqhagamshelwano wire, ukuqinisekisa crimp inokuthenjwa, ukuthintela isiphumo anti-lokungcangcazela.
Ukuba umgca ngamnye kufuneka ezininzi sub-line, iinkcukacha ekhoyo ayikwazi kuhlangatyezwane, AF series eyenzelwe ukusebenzisa ezinjengeetheminali ezimbini shunt eziqhagamshelene patch ubhedu ngaxeshanye.
AF2 tshintsha iimpawu zoyilo ngqo le terminal shunt kwi-terminal efakiweyo ngqo kwi iswitshi (umaphuli yesekethe) iplagi ufakelo ilula kwaye ithembekile, ukunciphisa isithuba kunye yokonga iindleko.
Previous: Grid wanikezela ibhokisi imitha ezinjengeetheminali AF1-HS35 / HS16X2
Okulandelayo: Grid wanikezela imitha ibhokisi ezinjengeetheminali AF1-95B / HS16X4
100 Pair yangaphandle Ibhokisi Distribution
3 Isigaba Box Pdu Power Distribution
4 Way Box Distribution
Box Distribution Ukukhanyisa
Box Distribution Metal
Omnye Rhuqa ezimbini Ibhokisi Distribution
zangaphandle Box Power Distribution
Box Distribution zeplastiki
eziphathekayo Box Power Distribution
Power Distribution Izixhobo
rack iNtaba Power Distribution Box
Box Distribution Wall Onyuswe
Box Distribution ngamanzi
Grid wanikezela imitha ibhokisi ezinjengeetheminali AF2-95B / HS16X4
Grid wanikezela iiterminal ibhokisi imitha AF1-3BW
Sishintshe kabini-yokwahlulahlula terminal line AF1-50BX2 ...
ibhokisi Meter ne ibhokisi lonikezelo AXMF-16X2 / 6X4
AF3 emhlabeni ibhasi AF3-95B / 10X4
Grid wanikezela ibhokisi imitha ezinjengeetheminali AF1-25 / C-16X3